Google inoderedzawo mutengo we4k mafirimu mune yayo katalog | IPhone nhau
Zvakare apple inoisa zvinoitika mumusika zvakare, asi panguva ino kwete mumafoni nhare, kubvira panguva ino iri muchikamu chekuteerera. Nekuvhurwa kweiyo nyowani Apple TV 4k, vakomana vanobva kuCupertino vakakwanisa kusvika chibvumirano nevashambadzi vakuru kuti vape zvemukati mu4k mhando nemutengo mumwe chetewo wakapihwa muHD kusvika zvino. Mutengo uyu wakagadzwa pamwero unosvika 19,99 euros. Nguva pfupi yapfuura Amazon Vhidhiyo yakadzikisa mutengo we4k mafirimu inoenderana neApple uye ikozvino inguva yeGoogle.
Google vhidhiyo sevhisi haidi kumira kubva pamusika mu4k uye ichangobva kuzivisa izvozvo Iyo inoderedza mutengo wemafirimu ainayo ari kutengeswa mu4k mhando kusvika pazviuru zvemamiriyoni 19,99 euros, imwe cheteyo parizvino inopihwa neApple neAmazon. Google yaive imwe yemakambani ekutanga kupa iyi mhando yezvinyorwa, kunyanya payakatangisa iyo Chromecast Ultra, chishandiso chinowirirana nerudzi urwu rwezviri mukati uye chakachengetedza chinzvimbo chayo chakakosheswa kusvikira Apple yatanga Apple TV 4k uye Amazon yavandudza iyo Moto TV inopa kuenzana kumwe chete.
Maawa mashoma apfuura, Amazon yakazivisa yayo nyowani Moto TV, chishandiso chinotipa zvakafanana maficha seApple TV 4k, asi isingasviki hafu yemutengo weApple TV. Iyo Fire TV icharova pamusika muna Gumiguru 25 pamutengo we69,99 euros pamberi pemitero, nepo Apple TV 4k yatove pamusika we179,99 euros pamberi pemitero. Musiyano wakakura chete pakati pemidziyo miviri unowanikwa mune yekuchengetera mukati, uko iyo Fire TV inongotipa 8 GB, nepo iyo Apple modhi ichiwanikwa mune maviri mavhezheni e32 uye 64 GB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Google inoderedzawo mutengo wema 4k mafirimu mune yayo katarogu